सरुवा रोगका कति चरण हुन्छन् ? कुन चरणमा पुगेपछि महामारीको रुप लिन्छ ? – erupse.com
नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण शनिबारदेखि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको भनिन्छ । विदेशबाट आएको कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा उनको आफ्नै परिवारको सदस्यमा सरेपछि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको भन्न थालिएको हो । सरुवा रोगका कति चरण हुन्छन् ? कुन चरणलाई के भनिन्छ ? नेपाल साँच्चिकै सङ्क्रमणको कुन चरणमा छ ? कुन चरणमा पुगेपछि यो महामारीको रुप लिन्छ ?
यो सरुवा रोगको सबभन्दा खराब र अन्तिम चरण हो । यो चरणमा पुगेपछि सरुवा रोगले महामारीको रुप लिन्छ । यो चरणमा सरुवा रोगलाई व्यवहारिक रुपमा नियन्त्रण गर्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ । यो चरणमा सरुवा रोगको सङ्क्रमण धेरै प्रमुख समूहमा देशैभरि फैलिएको हुन्छ । उज्यालोअनलाइनबाट